Super Lemon Tea ကြော်ငြာလား? လူကြော်ငြာလား? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » Super Lemon Tea ကြော်ငြာလား? လူကြော်ငြာလား?
Super Lemon Tea ကြော်ငြာလား? လူကြော်ငြာလား?
Posted by POL on Sep 21, 2011 in Celebrity, Classifieds, Personal Ad. | 33 comments
ဒီမှာလည်း ကြော်ညာတွေ ပါလား..
ညိုတိုတို ညစ်တစ်တစ်.. မဲမဲရောင် မသန်းတဲ့ အုန်းခွံရောင် အသားကို မိတ်ကပ်ပညာစွမ်းက တော်တော် ထက်တာပဲ..
အရန်အခန်းတွေမှာပါပါနေတဲ့တစ်ယောက်မဟုတ်လား…. လူကြေငြာလည်းမဟုတ်…lemon tea ကြေငြာလည်းမဟုတ်…အတွင်းခံကြေငြာဖြစ်မယ်…ထင်းနေတာပဲ……………….
လီမွန်တီးခွက်..ကို “စ” ကြည့်မိပါတယ်…ဆိုတဲ့လူလက်ညိုးထောင်…..
အမလေး..လေး လေး လေး လေး လေး လေး လေ
lemon tea ထည့်ထားတဲ့ခွက်ပြောပါတယ်။
ပိန်ပိန်ပါးပါးလှတပတလေးဆိုလည်း တော်သေးခုတော့ ပေါင်က နည်းပါဘူး ကြောက်စရာကြီး
သူက Super Lemon Teaအတူ နောက်တစ်မျိုးပါရော ကြော်ငြာသွားတာပါ
ကြည့်ရတာတော့ လူရော Tea ရော အကုန်ကြော်ငြာသွားသလိုပဲ။
ကောင်းပါတယ် Tea ရော လူရော ပေါက်သွားတာပေါ့
(Joke ) ပါ……………..
အရန်သရုပ်ဆောင်ကနေ မင်းသမီးတင်ရိုက်ဖို့အတွက် အစွမ်းကုန်ထုတ်သုံးထားပုံရတယ်… မြန်မာတွေရဲ့ အနုပညာဆိုတာ ဒါကို ဆိုလိုတာလားမပြောတတ်တော့ဘူး။
ကာယကံရှင်ကိုတိုင်က ရိုက်တော့လည်း ဘယ်တတ်နိုင်တော့မလဲ ???
ဟုတ်ကဲ့ အရံသရုပ်ဆောင် (မ)အင်ကြင်း လို့ထင်ပါကြောင်း။
အရည်ကောင်းလှတဲ့ ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးပါလား ဟရို..
ပုံကိုကြည့်ရတာ ဆူပါလိမွန်တီးကို သောက်မယ့်ပုံမရှိဘူး။ လှေကား အတက်အဆင်းလမ်းပိတ်ချထားပြီး ခလုပ်ဝင်တိုက်မဲ့ပုံလိုမျိုးထင်မိတယ်။ ကြည့်ရတာ Idea တခုခုလိုနေသလိုပဲ။
လီမွန်တီးကို မကြိုက်လို့ ကြိုက်တာကိုပဲရွေးပြီးအားပေးသွားပါတယ်
“ကျနော်ကဗမာလေ ဗမာဆိုတော့ ဗမာမလေးတွေကိုကြိုက်တာပေါ့”= မြန်မာတီးမစ်ကြော်ငြာထဲက
အဖိုးကြီးလေသံနဲ့ပြောလိုက်တာပါ ။၄င်းအဖိုးကြီးလေသံဖြင့်ဖတ်ပါလေ ….ဟဲ…ဟဲ…ဟဲ
all in one ကြေညာတာပါ စွဲမက်စရာကောင်းပါတယ်။ သူတော့ပေါက်တော့မယ်
ဆိုဒ်ပျက်ကြီးပါ …… ဘယ်လိုမှကို မလှပါဘူး …..
သေရောကွာ… ဖွင့်ထားတာ နာရီဝက်ကျော်နေပြီ ခုထိ ခေါင်းပဲ မြင်ရသေးတယ်…. ဖိုင်ဆိုဒ်ကပဲ ကြီးနေတာလား? သုံးနေရတဲ့ ကွန်နက်ရှင်က ပိန်းတိန်းနေတာလား မသိဘူး… ဒါမှ မဟုတ် ၂ ခုလုံးပဲလား
အရှက်မရှိတဲ့ မိန်းမမျက်နှာ ကြည့်ချင်တာကို ဘာလို့အောက်ငုံ့ တဲ့ ပို့စ်ပေးနေရတာလဲ .. တကယ့်ကို စိတ်ပိန်တယ် … အရံထဲက တစ်ယောက်ဆိုလျှင် အိဇာထွန်းများလား မသိဘူး နော် … သေချာမမြင်ရတော့ခက်တယ် .. ။ သူ့ဗိုက်ပေါ်မှာစိုးလို့ ဘရာစီယာကိုလည်း အပြည့်ဝတ်ထားတယ်… ဗိုက်ချပ်အောင်လည်း ဘောင်းဘီကို လည်း ရှိသင့်တာထက် ဗိုက်ပေါ်ရောက်အောင် ပိုဝတ်ထားတယ်
သူများတွေ အမြင်တော့ မသိဘူး၊ ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ အပေါ်ပိုင်းက ကြည့်ရမဆိုးပေမယ့် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီကို ထင်းနေအောင် လုပ်တာ sexy မဖြစ်ပဲ ရုပ်ဆိုးနေသလိုပဲ၊ အဲ့သည့်ဘောင်းဘီအစား တစ်ခြား G-String လို ဘောင်းဘီသေးသေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာမှမ၀တ်ပဲ ဒီအတိုင်းရိုက်တာကမှ ပိုပြီး ကြည့်လို့ကောင်းမယ် ထင်မိတာပဲ…
ဆင်ဆာလွတ်အောင်ရယ်..။ ပြချင်မြင်စေချင်တာရယ်..ကြားထဲ.. “စိတ်လွန်ဆွဲ”နေတဲ့.. ဓါတ်ပုံဆရာနဲ့.. အဓိကအိုင်ဒီယာပေးတဲ့.. ကုန်ပစ္စည်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့…. အူကြောင်ကြောင်…ကြော်ငြာလို့မြင်မိပါတယ်.။
sai dra says:
ကောင်း ပါတယ် ကောင်း ပါတယ် ကောင်း ပါတယ် ကောင်း ပါတယ် ကောင်း ပါတယ်
သြော်…………..ဒါမြန်မာ မိန်းကလေးလား…..lဆိုင်းဇီ သီချင်းလိုပေါ့
(ရေကူးကန်ကြော်ငြာ ဖြစ်မယ်နဲ့ တူတယ်နော်)
ဘယ်သူမှလဲ တိကျဘူး အဲဒါလီမွန်တီး ကြော်ငြာမဟုတ်ဘူး လီမွန်တီးအိတ်ခွံက ဓါတ်ပုံရိုက်မယ့်အလုပ်မှာ လေလွင့်လာတာ ဖန်ခွက်ထဲထည့်ထားတာ ဆာဒူးကြီးဆေး၊ သူကိုင်ထားတာက စတီးလက်ရမ်းကို နှစ်ဖက်ဆုပ်ကိုင်ထားတာ (အမလေးးးး ရေးရင်းနဲ့ကြက်သီးထ) အဲဒါ စတီးပစ္စည်း ကြော်ငြာ သိလည်းသိကြပဲနဲ့ ရမ်းရွှီးနေကြတယ် ….. သတ္တဝါအပေါင်း နာကျင်ခြင်းဘေးကင်း ကြပါစေဗျာ